ရသာချို: "အုန်းထမင်း၊ ကြက်သားဟင်းနဲ့ သရက်ချဉ်သုပ်"
Posted by ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး at 10:48 PM
အုန်းထမင်း၊ ကြက်သားဟင်းနဲ့ သရက်ချဉ်သုပ်
san ka new so yin bel lo lote ya ma lae hin.? thu ka pone mhan so yin yay 1 lone short htet ya lo.
ခုထိ မနက်စာ မစားသေးဘဲ ဘလော့လည်နေတာ
မရတော့ဘူး ဒီထမင်းနဲ့ ဒီဟင်းတွေ့တော့ ဗိုက်ဆာတာ ထိန်းမရတော့ဘူး
သွားပြီ ထမင်းသွားချက်တော့မယ် တာ့တာ
ပာင်း အတွဲအဖက်လေးက လိုက်တယ် ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးရေ.... အုန်းထမင်း၊ ကြက်သားပာင်းနဲ့ သရက်ချဉ်သုပ်လေး စားသွားတယ်နော်။
သော်ရေ - ကျွန်မချက်တဲ့ဆန်က ပုံမှန်ထမင်းဖြူချက်လည်း ဆန်နှစ်ဗူးကို ရေသုံးဗူးထည့်ရတာပါ။ အုန်းထမင်းချက်တော့လည်း ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ထည့်ချက်ပါတယ်။ အုန်းနို့ကို ဆန်နဲ့ဆီသတ်ပြီးချက်တာဆိုတော့ ရေမကျန်တဲ့အတွက် ပုံမှန်ချက်နေကျအတိုင်းပဲ ထည့်လည်း ဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
coconut milk ne seee tat lo shi yin, coconut milk twae arr lone khan twer tae ahti tat ya tar lar hinn..a ma
အုန်းနို့အရည် ခမ်းအောင်တည်ဖို့မလိုပါဘူး။ အုန်းနို့ရည် အပေါ်ယံကို ဆီလေးတွေ တက်လာရင် ရပါပြီနော်။